Duqa Magaalada Muqdisho oo Italy ko sii jeeda
Wafdi uu hogaaminaayo Raysul Wasaaraha dowladda Somaliya Mr. Ali Galayr, oo ay ka mid ahaayeen Wasirka Ganacsiga Maxamed Warsame, Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibedda Maxamed Xamsa iyo Duqa Magaalada Madaxda Muqdisho Cabdullahi Muse Xuseen ayaa bishii May 14 - 20,2001 uga qayb galay magaalada Bruxeels ee waddanka Beljum shirkii 3aad ee la dagaalanka faqriga oo ay isugu imaanayeen dowladaha horumay iyo kuwa 3aad.
Duqa Magaalada Muqdishu wuxuu gaar ahaan uga qayb galay May 15 - 16 shirka "Mayors" ka adduunka oo looga hadlaayay isku xirka magaalamada madaxyada iyo sidii ay wax iskula wada qabsan lahaayeen.
Duqa Magaalada Muqdishu intuu joogay Bruxels wuxuu May 17 la kulmay duqa magaalada Bruxells oo ay isla soo qaadeen xaalada Somaliya iyo gaar ahaan magaalada Muqdishu iyo sidii laysaga kaashan lahaayeen xiriirka labada magaalo madax.
Duqa Magaalada Muqdishu wuxuu booqasho ku tegay waddanka Jermalka, May 22 wuxuu qaabilay duqa magaalda Dusserdoof iyo lataliyaha shirkadda BUMAR oo horay u tagay Muqdishu si ay uga qayb qaataan dib u dhiska magaalada, waxayna isla soo qaadeen kaalinta ay uga qaadan karaan dib u dhiska magaalada kaddib dagaaladiii sokeeye ee magaalda baa'biyay.
May 23 wuxuu duqa magaalada Muqdishu booqday magaalada Troisdorf oo uu qaabilay duqa magaaladaas, oo iyadana ay ka wadahadleen dibudhiska magaalada Muqdishu iyo isku xirka labada magaalo.
June 1 wuxuu duqa magaalada Muqdishu Cabdullahi Muse Xuseen wuxuu la kulmay gudoomiyaha shirkadda Kocks Engineers oo hadda ka hor Muqdishu ka sameysay howlo fara badan oo ay ka mid ahaayeen ka hortagga biyo degyadda roobabka, gudoomiyaha shirkadda iyo duqa magaalada Muqdishu waxay ka falan qoodeen sida ay shirkaddu ugu qayb qaadato dib u dhiska magaalada.
Duqa Magaalada intuu joogay waddanka Jarmalka gaar ahaan magaalooyinka Boon iyo Frankfort qaabilay jaaliyadda Soomaliyeed ee deggan magaalooyinkaas iyo agagaarkooda iyo kuwa k ayimid Sweden, Hollad, England, Canada iyo Maraykanka.
Duqa Magaalada wuxuu warbixin dheer ka siiyay jaaaliyadda Soomaliyeed xaalada Somaliya gaar ahaan magaalda Muqdishu, wuxuuna ku guubaabiyay inay dhowraan midnimadda waddanka iyo dadkaba.
Duqa magaalada wuxuu June 5, 01 booqasho ku tegi doona magaaloyin badan oo ka tirsan waddanka Talyaaniga, halkaso la shiri doono dhigiisa ee magaaloyinkaas iyo jaaliyadda Somaliyeed ee magaalooyinkaas.